Haddii aad ahayd phone taageersaneyd sintaan Haweejkiinna Windows ilaa hadda laakiin waxa ay doonayaan in ay sameeyaan inuu ku biiro macruufka madal, aad ayaan dooneyn inay ka daba tegin sano maalka xogta dalwaddii kaydiyaa aad casriga Windows. Qaybta ugu muhiimsan ee maalkiinnu ku noqon lahaa boqolaal xiriirada badbaadiyey in aad qorin.
Taleefanada Windows, sida Nokia Lumia, ku xidhan ID sax ah Microsoft. ID Microsoft A waa cinwaanka email ah in loo isticmaalo in ay dib u kor xogta shakhsiga aad u muhiim ah sida xiriirada, jadwalka iyo doorbidida qalab.
In this article, waxaan soo bandhigi doonaa laba hab oo ay u gudbiyaan xiriirada ka Windows Phone si iPhone.
Free Habka: Xiriirada Transfer via Muuqaalka iyo MobileGo
Xiriirada Transfer isticmaalaya Wondershare MobileTrans ka mid Click
Qaybta 1. Free Habka: Xiriirada Transfer via Muuqaalka iyo MobileGo
Si aad u hagaagsan xiriirada aad badbaadisay in aad casriga Nokia Lumia la account Muuqaalka aad, waa in aad sameysato akoon ah oo ku saabsan www.outlook.com. Marka xisaabta waxaa si guul leh u abuuray iyo aad synched xiriirrada badbaadiyey ee Nokia Lumia la, markaas ka dib waxaad la wadaajin karaa xisaabtaada la MS Outlook.
Waa in aad raacdaa nidaamka hoos u dhamayso:
• Tallaabada 01: waafajinta xiriirrada badbaadiyey in aad casriga Nokia Lumia in account www.outlook.com aad.
1. Switch on your smartphone Nokia Lumia, iyo ugu rogto iyada oo la helo Dadka app ka qaybta Apps shaashadda guriga.
2. Marka Dadka app ka fura, ka jaftaa icon Settings (icon wakiil sida saddex dhibcood gudban safan) dhankiisii ​​midig hoose ee shaashadda ah.
3. Laga bilaabo menu pop-up ka, ka jaftaa dar doorasho xisaab.
4. Marka uu furmo suuqa XIDHIIDH ADD furmay, tuubada daro doorasho xisaab.
5. Laga soo furay DAR suuqa kala xisaab, ka jaftaa in ay doortaan Outlook.com.
6. suuqa kala OUTLOOK.COM ah, ka jaftaa badhanka Connect dhankiisii ​​bidix ee hoose.
7. Ka dib markii aad wareejiyey website-ka Microsoft ee, geli aqoonsiga saxda ah ee beeraha laga heli karaa, iyo Calaamada In button ka jaftaa.
8. Sug ilaa aad xiriirka la leedahay Nokia Lumia casriga ah ayaa riixay in account Microsoft ah.
• Tallaabada 02: Xiriiridda aad Muuqaalka ID Xafiiska MS ku Muuqaalka in aad PC.
1. aad PC, guji badhanka Start. (Windows 7 waxaa loo isticmaalaa ku hadlay tusidda this.)
2. Laga menu Start in muuqataa, guji Dhammaan barnaamijyada ka dibna riix si uu u furo weelka Microsoft Office 2013.
3. Guji Outlook 2013 oo ka barnaamijyada la heli karo.
Fiiro gaar ah: Xafiiska MS 2013 lagu rakibay on Windows 7 halkan waxa loogu adeegsaday in banaanbaxan. Haddii aad isticmaalayso version kasta oo kala duwan oo ah Windows ama MS Office, dooran fursadaha ku haboon sida.
4. Marka codsiga laga furay, markii ay keentay in, loo xaqiijiyo in lagu daro account email ah in MS Outlook.
5. In furay Add suuqa kala xisaab, geli aqoonsiga saxda ah ee xisaab Outlook.com aad.
6. Sug MS Office la wadaajin aad la Outlook.com xisaabta.
7. On box Account Add xaqiijin ah, riix badhanka Finish ka geeska midig hoose.
8. Ka dib markii aad xisaabta waxaa si guul leh ee la xidhiidha, inay sugaan xogta ee Outlook.com warsan in synched aad MS Office Muuqaalka profile.
Ka dib markii aad ku guuleeysatay oo dhan habka wada hadleen kor ku xusan, waxa ay haatan u yahay waqti ay ku soo dhoofsadaan aad xiriirka la leedahay in aad iPhone cusub. Tan waxaa lagu guulaysan karaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijka dhinac saddexaad ah ku tilmaamay si faahfaahsan ee qaybta labaad ee tutorial tan hoos ku siiyo:
Talaabada 3: Import Muuqaalka Xiriirada in Your iPhone In One Click
Wixii xal fudud oo si sahlan loo soo dhoofsadaan xiriirada ka MS Muuqaalka profile aad iPhone, waxaad kala soo bixi kartaa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo aad ayey u qalab cid saddexaad soo magacaabay MobileGo by Wondershare. MobileGo waa mid ka mid ah codsiyada utility mobile badan soo bandhigay by Wondershare, oo la soo saaro si aad nolol sahlan iyagoo qaar ka mid ah muuqaalada nifty in Lugood tago baxay. MobileGo for iOS Saaxiib wanaagsan software Apple ee in aad u saamaxaaya in ay maareeyaan waxyaabaha ku saabsan arrimo qalab si sahlan.
MobileGo for iOS Yimaado la Qalabka kaas oo u saamaxaya in aad qabato hawlo dheeraad ah qaar ka mid ah. Qalabka waxa ka mid ah qaababka sida dayanayaan files warbaahinta ka Lugood in aad PC, soo saarida audio ka file video ah, oo diinta ku files warbaahinta laga keeno in qaabka macruufka-socon. Qalabka ayaa sidoo kale yimaado oo la dhisay-in 'Xiriirada Manager "in kuu ogolaanayaa inaad dib ilaa aad xiriirka la leedahay, ka heli iyo saaro xiriirada nuqul ka qorin, iyo xiriirada dejinta / dhoofinta ama ka soo Muuqaalka profile.
Si aad u dajiyaan xiriirada ka account Muuqaalka aad si aad iPhone isticmaalaya Windershare MobileGo:
1. Download Wondershare MobileGo ka link ee kor ku xusan oo ku xidh aad kombuutarka.
2. Isku aad iPhone in aad PC isticmaalaya cable USB ah.
3. Ka dib markii ay isku xidha, sug ilaa MobileGo ogaado telefoonka iyo bandhigayaa ay icon in ay leeg- bidix ee interface ka.
4. Marka ay tani dhacdo, ka Murayaad bidix laftiisa, guji si loo doorto ikhtiyaarka ugu Xiriirada.
5. Marka la doortay, ka Murayaad saxda ah ee interface ah, riix badhanka Import ka toolbar caadiga ah ugu sareysa.
6. Laga bilaabo menu soo bandhigay, guji ka Outlook 2003/2007/2007/2013.
7. In Dooro sanduuqa gujisid Profile qor magac profile la doonayo.
8. Sug MobileGo inay bilaabayso geeddi-socodka soo degida xiriirada ka MS Office Muuqaalka profile aad iPhone.
9. Riix badhanka Import ku sanduuqa Xiriirada xaqiijin Import in la sii wado geedi socodka dejinteeda.
10. Sug MobileGo inay ku shuban iyo soo bandhigaan dhammaan xiriirrada laga keeno ee liiska Contact aad iPhone.
Habka ee ka smartphone Nokia Lumia wareejinta xiriirada si aad iPhone wada hadleen kor ku xusan waxay u baahan tahay in aad qaadatid qaar ka mid ah wakhtiga iyo daacad ah wax yar ka kaaftoomi ah. Haatan waa inaan habab kale oo kaa caawin kara inaad ka Windows Phone wareejiyo xiriirada si iPhone Runtii kaaftoomi-free oo la badbaadsho waqtiga aad.
Xiriirada Transfer isticmaalaya Wondershare MobileTrans ka mid Click: Part2
Wondershare MobileTrans waxay bixisaa qaab fudud oo kaa caawinaya in aad wareejin Windows Phone xiriirada si iPhone ama Android in hal click. Waxaa muhiim ah in halkan lagu xusey in ay ammaan tahay in ay isticmaalaan iyo lahaan lahayn wax khatar adiga ama qalab aad si.
Waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi version maxkamad xor ka badhamada download hoos ku qoran.
• Talaabada 1: kaabta Xiriirada ee Lumia koontadaada OneDrive.
On shaashadda bilowga telefoonka Lumia ah, dusheeda hoos uga mari hormariyo All Settings kaabta. Saxiix in aad xisaabta Microsoft ka dibna dooro xiriirada in ay gurmad. Sida caadiga ah aad telefoon si toos ah dib doonaa xiriir si aad u account microsft aad.
• Talaabada 2: Open Wondershare Mobiletrans, dooro Soo Celinta ka kaabta hab on interface ka, ka dibna dooro OneDrive ka fursadaha.
• Talaabada 3: Calaamad ku xisaabtaada OneDrive oo ha barnaamijka faylka gurmad iskaan. Marxaladani waxay dhowr ilbiriqsi qaato. Connect aad iPhone in kombiyuutarka, markaas barnaamijka u aqoonsadaan si toos ah.
• Talaabada 4: Dooro Xiriirada iyo guji Transfer bilow . Cinwaanka waxaa loo wareejin doonaa iPhone ee dhowr ilbiriqsi.
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia Lumia Si iPhone ah